မစံပယ်စာမေးပွဲပြီးသွားပါပြီ..။ တစ်လလုံးအတွင်းမှာ စာမေးပွဲသုံးရက်အတွက်အချိန်ကုန်ရပါတယ်..။ အောင်စာရင်းကလည်း ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်ရမယ့် အနေအထားမှာရှိပါတယ်..။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ချပိုင်နိုင်အောင် မလုပ်နိုင်တဲ့ မစံပယ်ပါ..။
အောင်စာရင်းစောင့်တုံး ထုံးစံအတိုင်း အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ရပါတော့မယ်..။ ဒါပေမယ့် အချိန်ပိုင်းအလုပ်က ဗုဒ္ဒဟူးမှာမရပါဘူး..။ ဒါကြောင့်မို့တစ်ရက်နားပြီး ကြာသပတေးနေ့မှာ စပါတော့မယ်..။ အားလပ်သွားတဲ့ ဒီနေ့နေ့ခင်းရယ်..၊ မနက်ဖြန်တစ်နေကုန်ရယ်ကို ဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတာ တွေးရင် အင်တာနက်ထဲမှာပဲ စာတွေတစ်လှေကြီးလိုက်ဖတ်နေမိပါတယ်..။ မဖတ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ စာရေးဆရာအတ္တကျော်ရဲ့ဆိုဒ်မှာ မဖတ်ရသေးတာတွေအများကြီးကျန်နေသေးလို့ သွားဖတ်လိုက်ပါတယ်..။ အဲဒီမှာသွားတွေ့တဲ့တစ်ခုက www.bl.uk ဆိုတဲ့ online gallery တစ်ခုမှာ Mandalay လို့ရိုက်ထည့်ရှာလိုက်ရင် သီပေါမင်းပါတော်မူတုံးကပုံတွေပါတွေ့နိုင်တယ်ဆိုလို့ ပုံတွေကိုလိုက်ရှာကြည့်ရင်း စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံတစ်ချိူ့ကို ကူးယူထားလိုက်ပါတယ်..။ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဟာ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကိုပြောတယ်လို့ ဆရာအတ္တကျော်ပြောသလိုပဲ ကိုယ်မသိမီတဲ့သမိုင်းတစ်ခုကို ပြန်မြင်လိုက်ရပါတယ်..။ အစပိုင်းတော့ပုံတွေကို ခေါင်းစဉ်မကူးဘဲကြုံသလို ကူးထားလိုက်ပါတယ်..။ နောက်တော့မှ ခေါင်းစဉ်တွေကလည်းပုံရဲ့ဆိုလိုရင်းကို အသေအချာပြောထားတာပါလားဆိုတာ သဘောပေါက်မိပြီး ပုံတွေကိုသေချာသိမ်းရပါတော့တယ်..။ စိတ်ဝင်စားမိတဲ့ပုံတွေကို ပြန်တင်ပြမယ်နော်..။
ဒီပုံက သီပေါမင်းကို ခေါ်သွားဖို့ အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တွေရောက်လာတဲ့ပုံတဲ့..။ လူတွေက ဘာမှန်းမသိလို့ အင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေကို ပွဲကြည့်သလို ၀ိုင်းကြည့်နေကြတယ်..။
ဒါတွေက သီပေါမင်းအစောင့် တစ်ချိူ့တဲ့..။ Some of Thipawmin's guard. လို့ပါတယ်..။ ကိုယ်ရံတော်နဲ့ အစောင့်က အတူတူပဲလား ထင်ပါရဲ့..။
သီပေါမင်းခေတ်က ရဲသားအချိူ့တဲ့..။ မိုက်တယ်နော်..။ ခေတ်ကိုပြနေသလိုပဲ..။ လူတန်းစားကလည်း သိသာတယ်နော်..။ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ..။
young Burmese Princes and Princesses တွေတဲ့..။ ဟုတ်မယ်..။ ရွှေလက်ကောက်တွေ..၊ မျက်နှာချေတွေ..၊ တိုက်ပုံအကျအနနဲ့ တောင်ရှည်ပုဆိုးတွေနဲ့..။ သာမန်လူတန်းစားဆို ဘယ်ဒီလိုဝတ်နိုင်၊ နေနိုင်မလဲနော်..။ မဲမဲသဲသဲ ဖုန်နဲ့သောသောလေးတွေနေမှာ..။
A Cigar Shop in B Road. B လမ်းက ဆေးပေါ့လိပ်သည်ဆိုတော့ ၂၆ ဘီလမ်းက နေမယ်..။ လူတန်းစားက သိသာတယ်နော်..။
ဆေးလိပ်သောက်တာ ဖက်ရှင်တစ်ခုထင်တယ်နော်..။ ဒါကတော့ အကောင်ကြီးကြီး အမြီးရှည်ရှည်တွေရဲ့ သမီးတွေလားမသိဘူး..။ A Couple of Burmese Young Ladies. တဲ့..။ မော်ဒယ်ဂဲလ်တွေလိုပဲနော်..။
ကိုပြည်ကြီးတွေကလည်း သိပေါမင်းခေတ်ကတည်းကိုက မန္တလေးမှာ ဈေးဆိုင်အကျအနဖွင့်ကာ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေခဲ့ပါတယ်တဲ့..။ အခုခေတ်မှသူတို့ကရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး..။ သီပေါခေတ်ကတည်းကဆိုတော့ ရိုဟင်ဂျာတွေလို လွှတ်တော်မှာ သူတို့ကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့ မတောင်းဆိုတာ ကံကောင်းနော်..။ ပုံနာမည်က John Chinaman in King's Bazaar တဲ့..။
ဒါကတော့ ဖန်သားနန်းတော်တဲ့..။ ဂုဏ်ယူချင်လို့ ဒီပုံကိုတင်လိုက်တာ..။ နန်းတော်ကိုဖန်နဲ့ဆောက်ပြီး နေခဲ့တယ်ဆိုတာ ဂုဏ်ယူစရာမဟုတ်ဟုတ် ဟုတ်ဟုတ် ယူမှာပဲ..။ တို့ဘုရင်တွေ ဒီလိုနေခဲ့တယ်ပေါ့..။ ဂုဏ်လုပ်စရာမဟုတ်တာတွေကို အတင်းကြံဖန် သီချင်းလုပ်ဆိုပြီး အမြဲလွှင့်နေတာကို ကြားခဲ့ရဘူးတော့ ဘာနေနေ ဂုဏ်ပဲယူနေချင်တော့တယ်..။ မှတ်ကရော..။ ပုံနာမည်က The Glass Palace တဲ့..။
ဒီပုံက ဘုန်းကြီးပျံပွဲက ပုံလို့ထင်တာပဲ..။ Splendid Honor toaDead Buddist. လို့နာမည်တပ်ထားတယ်..။ သူလည်းခမ်းနာလို့ တင်လိုက်တယ်..။
SPG Mission Church တဲ့..။ သီပေါပါတော်မူတော့ သာသနာပြုတွေရောက်လာပြီလေ..။ ရင်နာဖို့ကောင်းတယ်နော်..။ အုပ်ချူပ်တဲ့သူ ညံ့တာနဲ့ ဘာသာတရားတွေပါ နယ်ချဲ့ခံရတယ်..။ အခြေခံမခိုင်တဲ့သူတွေ ဘာသာတွေပြောင်းကုန်ကြရော..။
SPG Mission School တဲ့..။ သေချာတယ်..။ ဒီကျောင်းထွက်တွေဆိုရင်တော့ ဘာသာပြောင်းသွားတဲ့သူ လူ ၁၀၀ ရှိရင် ၉၉.၅ လောက် ဘာသာပြောင်းသွားကြမယ်ဆိုတာ..။
ဒီပုံက ကင်းဝန်မင်းကြီး ဦးကောင်းရဲ့ နေအိမ်ပုံတဲ့..။ မစံပယ်က ကင်းဝန်မင်းကြီးမွေးခဲ့တဲ့ရွာကို တစ်နှစ်သမီးကတည်းက အမေတာဝန်ကျလို့ နေထိုင်ခဲ့တာ အခုချိန်ထိဗျ..။ ဒါကြောင့်မို့ ဦးကောင်းအစွဲရှိတယ်..။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဦးကောင်းရွာကလို့လည်း ဂုဏ်ယူတတ်တယ်..။ ပြောပါပကော..။ ဂုဏ်ယူစရာမရှိ ကြံဖန်ဂုဏ်ယူတတ်တယ်လို့..။ မစံပယ်တို့ရွာကျောင်းကဘုန်းကြီးလည်း ဦးကောင်းသုံးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကို ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ အပြကောင်းတာ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေ အကြီးအကျယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကြတုံးက လူစိမ်းတစ်ယောက် ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုတက်ဖူးပြီး ကင်းဝန်မင်းကြီးသုံးခဲ့တဲ့ ကွမ်းညှပ်ကို မ,သွားပါရောလား..။ (ခိုးသွားတယ်လို့ စကားကြမ်းကြမ်း မသုံးချင်လို့ပါခင်ဗျာ..။) ဘုန်းကြီးက ပစ္စည်းအသေးတွေကို စားပွဲပေါ်မှာ ခင်းကျင်းပြထားတာ ဟိုလူက ဒါတွေတန်ဘိုးရှိမှန်း သိမှာပေါ့..။ ဘုန်းကြီးကတော့ ဒီလိုလုပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်မထားတော့ ပြတာပေါ့..။ နောက်တော့ မစံပယ်တို့ရွာကျောင်းကဘုန်းကြီးလည်း ပစ္စည်းအားလုံးကို မှန်ဗီရိုထဲပဲထည့်ပြပါတော့တယ်..။ ဘယ်ဧည့်သည်လာလာ ကိုရင်တစ်ပါးကို အပါးကမခွာခိုင်းတော့ဘဲ မှန်ခန်းထဲက ပစ္စည်းတွေကိုပဲပြပါတော့တယ်..။ ဦးကောင်းအမေ၀တ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ လွန်းနှစ်ရာချိတ်တွေ..၊ ဦးကောင်းပြင်သစ်ကပါလာတဲ့ မီးပန်းဆိုင်းတွေတော့ ရှိတုံးဗျာ..။ ဒါနဲ့စကားမစပ်... ၀န်ကြီးတွေထဲမှာ ဟစ်ဖြစ်နေတဲ့ လူအများမေတ္တာပွားကာ အချစ်ပိုကြတဲ့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးကျော်ဆန်းဟာ ကင်းဝန်မင်းကြီးမျိူးလို့ ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ..။ ရာဇ၀င်မှာ ကင်းဝန်လိမ်ထုတ် မင်းဆက်ပြုတ်လို့ တဘောင်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်..။ ဒါကို ကင်းဝန်နယ်သားတွေ မကြိုက်ဘူး..။ လက်မခံနိုင်ဘူးနော်..။ ကင်းဝန်က ခေတ်အမြင်ရှိလို့၊ ပြင်သစ်ကိုသွားထားတာမို့ စစ်တိုက်ရင်မနိုင်နိုင်ဘူးဆိုတာသိလို့ အရှူံးပေးခိုင်းတာပဲရှိတယ်..။ တကယ်တမ်း ပါတော်မူပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ ကြားဘူးတာပဲ..။ ပါတော်မူခန်းဆိုတဲ့ ဇာတ်ထုပ်မှာလည်း အဲလိုပဲကြားဘူးတာပဲ..။ အဲဒါဆိုတော့ ဦးကောင်းကခေတ်အမြင်တော့ရှိတယ်..။ ပါတော်မမူအောင်တော့ မစီမံနိုင်ခဲ့ရှာဘူးလို့ ဆိုရမှာပေါ့နော်..။ စီမံဖို့ရာကလည်း ခက်ခဲ့ပုံရပါတယ်..။ မိဖုရားကတစ်မျိူး..၊ သားတွေအရွယ်စုံ ဆိုဒ်စုံတွေကလည်း တစ်မှောင့်နေမှာကိုး..။
ပုံတွေက ၅၀၀ ကျော်လောက်ရှိတယ်..။ သီပေါအမေရဲ့ဂူ..၊ ပုဂံမင်းအမေဂူဆိုတာတွေလည်းပါတယ်..။ လူပုံတွေပဲ ပိုကူးတာများတယ်..။ ဘယ်လိုနေထိုင်ကြလဲဆိုတာ သိချင်လို့လေ..။
ကျောင်းပိတ်ထားတုံး အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ရင်း..၊ အိမ်ကိုထိန်းရင်း.. ၊ အင်္ဂလိပ်စကားလေ့ကျင့်ရင်း စာတွေရေးသွားမယ်လို့ စိတ်ကူးမိပါတယ်..။ သူများဘလော့တွေကိုလည်း အားကျလို့ပါ..။ လူလည်းများများလာဖတ်စေချင်တယ်လေ..။ အမှန်ပြောတာပါ..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 11/29/2011 10:07:00 pm
ဒူဒူကြီး 12/03/2011 04:31:00 pm
ခေါါတ်စနစ်ကိုပြောင်းဖို့ ကြိုးစားရင်း၊ မအောင်မြင်တဲ့အခါ သမိုင်းတရားခံဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဦးကောင်း ဟာ ခေါါတ်မှီတဲ့ အတွေးအခေါါရှိပြီး၊ မင်းကြီးဦးကောင်းရဲ့ စည်းမျှဉ်းခံဘုရင် စနစ်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်၊ National Hero တဦးအဖြစ်သမိုင်းမှာ၊ ကျန်ခဲ့မှာ သေခြာပါတယ်။ သံအမတ်ကြီးဦးမောင်မောင်စိုးတင့် ကတော့ ကင်းဝန်မင်းကြီးရဲ့မြစ် မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဆိုပြီး၊ စာအုပ်တအုပ်ရေးဖူးပါတယ်။